सहयोगको लागि क्यान्सरपीडितको याचना – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सहयोगको लागि क्यान्सरपीडितको याचना
२०७० फाल्गुन ५, सोमबार १४:५४ गते
भरतपुर । व्लड क्यान्सरबाट पीडित बनेका घ्याल्चोक गाविस–१ गोरखाका २० वर्षीय सरोज गुरूङ केही सातादेखि वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् ।
आर्थिक रुपमा निर्धन र असहाय उनी थप उपचारका लागि सहयोगको याचना गरिरहेका छन् । डा. साजन थापाले उनलाई एएमएल–एम ४ नामक व्लड क्यान्सर भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् ।
अहिले उनलाई दैनिक किमो र रगत दिइरहनुपर्ने भएकाले उपचार खर्च जुटाउन गाह्रो परेको सरोजकी श्रीमती अञ्जलीले बताएकी छन् । ‘अहिलेसम्म चारलाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । डाक्टरले उपाचारका लागि थप १२ लाख रूपैयाँ लाग्ने बताएका छन् । नाजुक अवस्थाका हामीले यतिधेरै रकम जुटाउन सक्ने अवस्थाका छैनौँ’, अञ्जलीले पत्रकारसँग दुखेसो पोखिन् ।
सरोजका बुबा उदयबहादुरको पाँच वर्षअघि नै निधन भइसकेको छ । उनको परिवारमा आमा, बहिनी र श्रीमतीमात्र छन् । आम्दानीको कुनै बाटो नभएकाले उनका परिवारले सवैसँग सहयोगको याचना गरेका हुन् । सरोज सात महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका थिए । काम गर्ने क्रममा १० दिन लगातार ज्वरो आएर दुवै आँखामा रगतको धब्बा देखेपछि कम्पनीले उपचार गर्न लैजाँदा ब्लड क्यान्सर भएको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि नेपालमै उपचार गरे ठीक हुन्छ भनेर कम्पनीले घर पठाइदिएपछि उनी बाँच्ने आशामा उपचार गराइरहेका छन् ।
क्यान्सर अस्पतालको व्लक २ अन्तर्गत वार्ड १ को १६ नं. बेडमा उपचार गराइरहेका सरोजको जीवन बचाउन चाहने दाताहरुले अस्पताल कम्पाउडमै रहेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको ००२०००२८०१ ‘एसडी’मा सहयोग रकम जम्मा गर्न सकिन्छ । सरोजलाई प्रत्यक्ष रुपमा भेटेरै पनि सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्न सकिने छ । जसका लागि ९८०३४९९०१२ मा सीधा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।